पानी पर्ने भन्दै पोखरामा स्टेडियम नबनाउन धुर्मुसलाई सुझाव, कसले दियो यस्तो सुझाव ? - Kheladi News Kheladi News
पानी पर्ने भन्दै पोखरामा स्टेडियम नबनाउन धुर्मुसलाई सुझाव, कसले दियो यस्तो सुझाव ?
पोखरा(खेलाडी न्युज) पोखरामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको लागि आवश्यक जग्गा हेरेर फर्किएका कलाकार सीतराम कट्टेललाई गलत सूचना प्रवाह गरेका छन् । पोखरामा अधिक वर्षा हुने भएकोले स्टेडियम बनाउन उपयुक्त नहुने सुझाव दिइएको पाईएको छ ।
तीन दिनअघि मात्रै धुर्मुसले पोखरा रंगशालाभित्रको क्रिकेट मैदानसहित अन्य दुई ठाँउ समेत अवलोकन गरी फर्किएका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समेत पोखरामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मौदन बनाउन उपयोगी हुने सल्लाह धुर्मुसलाई दिएको थियो । त्यही अनुरुप उनी पोखरा अवलोकनको लागि आएका थिए । तर, पोखरामा अत्यधिक वषर भइरहने कारणले त्यहाँ क्रिकेट रंगशाला बनाउनु उपयुक्त नहुने उनलाई धेरैले सुझाव दिएपछि पोखरेली क्रिकेटप्रेमी निराश बनेका छन् । सुझाव दिने पोखराको क्रिकेट विकास विरोधी रहेको समेत पोखरेली क्रिकेट प्रेमीले बताएका छन् ।
पोखरालाई खेलकुदको शहरको रुपमा परिचित गराउने उद्देश्यसँगै न्युट्रल भेन्यु हुने विश्वास गरिएपनि यस्तो गलत हल्लाले पोखराको खेलकुद विकासमा ठेस पुग्ने निश्चित देखिएको छ । उता, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको लागि दौडाहामा रहेका कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले बनाउने योजना बनाइएको स्टेडियम मल्टिप्रमोजको हुने निश्चित जस्तै भएको छ । विभिन्न ठाउँमा स्थलगत अध्ययन पछि उनले स्टेडियम बहुउपयोगी बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
क्रिकेट स्टेडियमको लागि काठमाडौं , पोखरा, चितवन, हेटौडा, रुपन्देही लगायतका जिल्ला भ्रमण गरी काठमाडौं फर्किएका छन् । उनले क्रिकेट स्टेडियमको नाममा भने लर्ड वुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने धेरैजसो इन्डोर तथा आउटडोर खेलहरु अटाउने गरी स्पोर्टस् भिलेजको अवधारणामा रंगशालाको निर्माण गरिने धुर्मुसले बताए । ‘इण्डोर गेमहरु भलिबल, तेक्वान्दो, ब्याडमिन्टन, टेबलटेनिस खेल्न मिल्नेयुक्त रंगशाला बनाउने योजना छ । उनले भने ।